दाउले घाँटीमा प्रहर गरी श्रीमतीको हत्या - Nayabulanda.com
नयाँ बुलन्द २८ जेष्ठ २०७८, शुक्रबार १८:०९ 131 पटक हेरिएको
इलाम। देउमाई नगरपालिकाका वडा नं. ४ चित्रेका एक व्यक्तिले श्रीमतीको हत्या गरेका छन् । घरायसी विवादका कारण झगडा हुँदा ४५ वर्षीय ताकबहादुर तामाङ्गले ४६ वर्षीया श्रीमती सुर्जामाया तामाङको शुक्रबार विहान साढे आठ बजे हत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।
तामाङले श्रीमतीको दाउ (बाम्फोक) ले घाँटी काटेर हत्या गरेको प्रहरी नायव निरीक्षक लालध्वज सुवेदीले जानकारी दिए ।
भोजपुरको साविक ओख्रे ४ घर भएका तामाङ देउमाई नगरपालिका वडा नं. ४ तुलसीराम आचार्यको घरमा एक वर्षदेखि डेरा गरेर बस्दै आएका थिए ।
घटना लगत्तै प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको छ ।